MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2016 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Month: ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2016
MPT မှ IP-VPN ဝန်ဆောင်မှု စတင်တော့မည်
[:en]အရည်အသွေးမြင့် ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးများအတွက် ကွန်ရက်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးရရှိနိုင်ပြီ။
(ရန်ကုုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုုနှစ်) – MPT မှ စီးပွားရေးလုုပ်ငန်းစု နှင့်လုပ်ငန်းရှင် အသုံးပြုသူများအတွက် IP-VPN (Virtual Private Network) ဝန်ဆောင်မှုကိုု စတင်လုုိက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုုက်သည်။ MPT ၏ IP-VPN မှာ အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ရှိသော IP ကွန်ရက်ကိုု အသုံးပြုကာလုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် အကြီးမားဆုံးလည်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို ပထမဆုုံးအနေဖြင့် စတင်အသုုံးပြုသော လုုပ်ငန်းစုုမှာလည်း မြန်မာနိုုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော ငွေရေးကြေးရေးနှင့်ဆိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနေသည့် CB ဘဏ် ဖြစ်သည်။
သာမန်ရိုးရိုး အင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော VPN များဖြင့်ယှဉ်လျှင် အထူးသီးသန့်ဖြစ်ကာ ကန့်သတ်ထားသော MPT ၏ IP-VPN ကွန်ရက်မှာ လုုံခြုံရေးပိုုင်းအရနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အပိုုင်းတွင်ပါ များစွာ သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ အခြားတစ်ဘက်တွင်လည်း ကော်ပိုရိတ် ကွန်ရက်များမှာ သီးသန့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်လိုင်းများ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းထားသည့် လိုင်းများဖြစ်နေပြီး MPT ၏ IP-VPN မှာမူ ပိုမိုပြီး ပြုလွယ်ပြင်လွယ်ရှိကာ လွယ်ကူစွာဖြင့်ချဲ့ထွင်နိုင်သလို စျေးနှုန်းပိုမိုသက်သာစွာဖြင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့သော အချက်များနှင့် အတူ ယနေ့ကာလတွင် IP-VPN ကွန်ရက်များမှာ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများအတွက်အများက ပုံမှန်သုံးစွဲသည့် ကွန်ရက်များဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။
MPT IP-VPN ၏ အဓိက လက္ခဏာရပ်များမှာ-
ကန့်သတ်ထားသော သီးခြား ကွန်ရက်ကိုုအသုုံးပြုထားခြင်းကြောင့် လုုံခြုံမှုအရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း
ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်း သဘောတူညီချက် (SLA) နှင့်အတူ အရည်အသွေးပြည့်သည့် ဝန်ဆောင်မှု(QoS) နှင့် အာမခံထားသည့် Bandwidth ကြောင့် ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
တစ်နှစ်ပတ်လုံး ၃၆၅ ရက်တိုင်တိုင် နှင့် ၂၄ နာရီ ပတ်လုံး စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ထားခြင်း
ငှားရမ်းထားသည့် ကွန်ရက်ပါသောလိုင်း နှင့်ယှဉ်ပါက စျေးနှုန်းသက်သာခြင်း
ကွန်ရက်ကိုု လွယ်ကူစွာချဲ့ထွင်နိုုင်ကာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း
နေရာအနှ့ံသိုု့ ရောက်ရှိနိုုင်ခြင်း (တစ်နိုုင်ငံလုုံးအနှံ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုုင်ခြင်း) တို့ဖြစ်ပါသည်။
IP-VPN မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချင်းချင်း ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိခံစားစေနိုင်ပါသည်။ MPT မှ ပေးနေသည့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည့် (အသံ၊ Data နှင့် SMS) များအပြင် ကြိုးလိုင်းဖုန်း (Dataနှင့် အသံ)ကို ကုမ္ပဏီများစွာက၎င်းတို့၏ နေ့စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနေပြီးဖြစ်ပါသည်။ MPT အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီများစွာကို လွတ်လပ်စွာနှင့် ဆက်သွယ်မှုပြုနိုင်ရန်အတွက် အကူအညီပေးကာ ယင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်း ပါဝင်လုပ်ဆောင် နိုင်စေရန်အတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT-Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Koichi Kawase က “မြန်မာနိုုင်ငံရဲ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ ပြီးပြည့်စုုံတဲ့ စီးပွားရေးလုုပ်ငန်းသုုံး ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကိုု နေ့စဉ်နဲ့အမျှလိုုအပ်လာပါတယ်၊ MPT IP-VPN ဝန်ဆောင်မှုကိုု စတင်ခြင်းအားဖြင့် စျေးနှုန်းသက်သာပြီး လုုံခြုံမှုရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုုပ်ငန်းသုုံးကွန်ရက်ကိုု တစ်နိုုင်ငံလုုံးအနှံ့ပေးနိုုင်တော့မှာဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးလုုပ်ငန်းတွေကိုုရော အခြားနိုုင်ငံတကာကနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာပြီး အခြေစိုုက်ထားတဲ့ လုုပ်ငန်းတွေကိုုရော ထောက်ပံ့ကူညီပေးရင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတိုုးတက်မှုမှာ တစိတ်တဒေသကနေ ကူညီပံ့ပိုုးချင်ပါတယ်”ဟုု ပြောသည်။ MPT IP-VPN ဝန်ဆောင်မှုကိုု ပထမဆုုံးအသုုံးပြုသော CB ဘဏ်၏ Head of Infrastructure and Nextwork ဖြစ်သူ ဦးကျော်အောင်စိုး က “ သာမန် ရိုးရိုး အင်တာနက်လိုုင်းကိုု အကြာကြီးသုုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်တိုု့ MPT IP-VPN ဝန်ဆောင်မှုကိုု သုုံးဖိုု့ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်၊ ဘာလိုု့လဲဆိုုတော့ အဆင့်မြင့်တဲ့ လုုံခြုံမှုအပိုုင်းမှာ အတူတူပဲဖြစ်ပြီး စျေးကျတော့ ပိုုပြီးသက်သာအဆင်ပြေလိုု့ပါ၊ နောက်ပိုုင်းမှာ ကွန်ရက်ချဲ့ထွင်တာတွေကိုု လွယ်လွယ်ကူကူလုုပ်လိုု့ရမယ်ဆိုုတာကလည်း ပိုုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်၊ ဒီရွေးချယ်မှုဟာ ကျွန်တော်တိုု့ဘဏ်ရဲ့ စီးပွားရေးပိုုမိုုတိုုးတက်လာခြင်းမှာ အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုုတာ ယုုံကြည်ပါတယ်”ဟုု ပြောသည်။
MPT သည် ယင်း၏ IP-VPN ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာကိုု ရန်ကုုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်စသည့်မြို့များမှ အခြားဒေသများသိုု့ပါ ချဲ့ထွင်လျက်ရှိပြီး ပြီးစီးသည့်အချိန်တွင်လည်း ကြေညာမှုများ ထပ်မံပြုလုုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သုုံးစွဲသူများ၏ လိုုအပ်ချက်များ ပြည့်မှီရန် MPT သည် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ မိုုလ်ဘိုုင်းဖုုန်းများမှ တဆင့်လွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်နိုုင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ နိုုင်ငံတကာ ချိတ်ဆက်မှုများ ကိုုလည်း ထပ်မံချဲ့ထွင်သွားရန် လုုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပါသည်။[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 29, 2016 နိုဝင်ဘာ 7, 2016 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT မှ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း နှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးများရှိ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းများအား လျှပ်စစ်မီးအိမ်များလှူဒါန်း
ကျောင်းသားများ၏သင်ယူမှုစွမ်းရည်တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် စာသင်ခန်းများအတွင်း ဆိုလာမီးအိမ်များ တပ်ဆင်လှူဒါန်း
မန္တလေး၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT)မှ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းများသို့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်မီးအိမ် (၈၃၇)လုံး လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့ရှိ ဖောင်တော်ဦးဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း၌ ယနေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး ကျောင်းများသို့ အစီအစဉ်တကျ ပေးပို့လှူဒါန်းမည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်မီးအိမ်များအား ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူမှုစွမ်းရည်တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် စာသင်ခန်းများအတွင်းတွင် တပ်ဆင်လှူဒါန်းသွားပါမည်။
အများပြည်သူများ၏လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်မီးအိမ်များ လှူဒါန်းရန်အတွက် MPT ၏ မကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့သော နံပါတ်အလှများလေလံတင် ရောင်းချပွဲကြီးတွင် MPT သုံးစွဲသူများမိဘပြည်သူများမှ သဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာပါဝင်ခဲ့ကြသည့်အတွက် အောင်မြင်စွာ လှူဒါန်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လေလံံပွဲသို့ပါဝင်သူပေါင်း (၁၆၄) ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး နံပါတ် ၅ လုံးတူ၊ နံပါတ် ၆ လုံးတူ၊ နံပါတ် ၇ လုံးတူနံပါတ်တွဲများပါဝင်သည့် နံပါတ်ပေါင်း(၁၂၆)ခုကို လေလံတင်ခဲ့ရာ အမြင့်ဆုံး သိန်း (၂၂၀)အထိ လေလံအောင်ခဲ့သည်နံပါတ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operation ၏ Chief Operation Officer ဖြစ်သူ Mr. Yoshiaki Benino က “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့ ကျောင်းသားများကို အကျိုးကိုရှေးရှု့ပြီး အခမဲ့ပညာရေးကို သင်ကြားပေးနေသော ဘုန်တော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းများကို ယခုလို သဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာ ပါဝင်ကုသိုလ်ယူကြတဲ့ MPT ရဲ့ သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ပြည်သူများရဲ့ ရှေရည်အကျိုးအတွက် အမြဲတမ်းအလေးထားတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ လူနေမှုဘဝကို မြှင့်တင်ပြီး အလင်းရောင်နှင့် လျှပ်စစ်မီးမရရှိတဲ့ဒေသများအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT)က အကောင်အထည် ဖော်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ပရဟိတလှူဒါန်းမှု လေလံပွဲကြီးနောက်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အပ့ံပြုတဲ့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကို တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာကျေနပ်မိပါတယ်။” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်မီးအိမ်များကို ဖောင်တော်ဦးဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းမှတဆင့် လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသောဒေသများမှ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းများသို့ လှူဒါန်းပါမည်။
ဖောင်တော်ဦးကျောင်းထိုင်ဆရာတော်၊ ဘုန်တော်ကြီးသင်ပညာရေးဆိုင်ရာ မန္တလေးတိုင်းအလုပ်အမှုဆောင် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနာယကမှ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းများအား လှူဒါန်းသည့် နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်မီးအိမ်များကို လက်ခံရယူပြီး “ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ စာသင်ခန်းလေးတွေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် သဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာ လှူဒါန်းပြီး ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ MPT နဲ့ MPT သုံးစွဲသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယခုလိုလှူဒါန်းတဲ့အတွက် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ညာရေး ကျောင်းများမှာ ရှိတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအလင်းရောင်ပြည့်ဝတဲ့့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပညာသင်ကြားစေနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုန်တော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းများနဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို များစွာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။”ဟုမိန့်ကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း အခန်းအနားသို့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့် KSGM အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးမှ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအရာရှိချုပ် Mr Shinjiro Hara နှင့် ဖောင်တော်ဦးကျောင်းမှ အကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်သည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးအိမ်များကို Panasonic မှာ “Eneloop Solar Storage” ယူနစ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ဆိုလာပြားများ၊ ဘထ္ထရီများ နှင့် LED မီးချောင်း တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါ သည်။ အဆိုပါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးအိမ်များကို နေ့ဘက်တွင် အားဖြည့်ကာ ညဘက်တွင်သို့မဟုတ် အလင်းရောင်နည်းပါးသည့် မိုးအုံ့သောအချိန်များနှင့် မိုးရွာသော အချိန်များတွင် ၆ နာရီမှ ၈ နာရီ အထိ LED မီးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးအိမ်များသည် ငါးနာရီကြာအားသွင်းရုံဖြင့် ၂၄နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၅ နှစ်ကြာ အသုံးခံနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးဘထ္ထရီကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်သည်။ ထိန်းသိမ်းစရိတ် လုံးဝမရှိဘဲလည်ပတ်ရန်အတွက်လည်းငွေကုန်ကျမှု ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ပြင် ဤမီးအိမ်များဖြင့် ညအခါ အလင်းရောင်ကောင်းစွာရရှိနိုင်ပြီး USB ကြိုးမှ တစ်ဆင့် မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းများကိုလည်း အားဖြည့်သွင်းနိုင်ခြင်းဖြင့် ဒေသခံအချင်းချင်းဆက်သွယ်ရေးများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေနိုင်မည့် အစီအစဉ်လည်းဖြစ်သည်။
မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၏ လူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက် များကို လေ့လာလိုပါက https://www.mpt.com.mm/en/whats-new/csr-activities/တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 26, 2016 ဒီဇင်ဘာ 15, 2016 Categories CSR Activitiesmm, Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT မှ “ဒေတာများနဲ့ည” အမည်ရှိ ညသုံး Data Package ကို စတင်
[:en]စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဒေတာစျေးနှုန်းများ ဖြင့် ညအချိန်တွင် အင်တာနက်အသုံးများသည့် သုံးစွဲသူများအတွက် အစီအစဉ်သစ် စတင်လိုက်ပြီ။
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်– မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT)မှ ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီအတွင်း အင်တာနက်အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် သုံးစွဲသူများအတွက် “ဒေတာများနဲ့ည”အမည်ရှိ ညသုံး Data Package ကိုစတင်လိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများနှင့် ဤဒေတာအထူးအစီအစဉ်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“ဒေတာများနဲ့ည”ကို MPT ၏ GSM/WCDMA ဆွေသဟာအသုံးပြုသူ အားလုံး ရယူသုံးစွဲနိုင်သည်။ Data Package အမျိုး အစား ၃ မျိုးရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ
Package အမျိုးအစား ဒေတာပမာဏ စျေနှုန်း (ကျပ်) USSD Code
<၂၅၀ မီဂါဗိုက်width="156">250 MB ၃၀၀ *237*1#
၇ည ၁ ဂီဂါဗိုက် ၁၀၀၀ *237*2#
၃ဝည ၄ ဂီဂါဗိုက် ၃၂၀၀ *237*3#
တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်း package များကို ဝယ်ယူသူများသည် ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီအတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ package ဝယ်ယူအသုံးပြုမှုအတွက် မိမိ၏ မူလလက်ကျန်ငွေ၊ အခြားသောအပိုဆောင်းဒေတာများနှင့် (Standard Internet Package) များကဲ့သို့သော အခြား package များထက်အရင် အသုံးပြုဖြတ်တောက် သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤ ညသုံးဒေတာကို ဝယ်ယူအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် MPT ၏ မြန်ဆန်သော 3G9+ ကွန်ရက်ဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကို 1MB လျှင် ပြား၈၀ မှစတင်၍ စျေးသက်သာစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operation ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Koichi Kawase က “MPT က ဝန်ဆောင်မှု ပိုင်းမှာပိုပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အမြဲကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်၊ အင်တာနက်ကို နေ့ခင်းဘက်မှာထက် ညဘက်မှာ ပိုပြီးသုံးစွဲကြသူတွေအတွက်လည်း စျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို ပေးချင်ပါတယ်၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေ တိုးမြှင့်ပြီး သုံးစွဲသူတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရစေဖို့က MPT ရဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အဓိကပန်းတိုင်ပါ၊ ခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ကွန်ရက်ကိုလည်းချဲ့ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ လူဦးရေ ၉၂%ကို ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ၊ အခုပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ညအချိန်သုံး Data Package Promotion နဲ့ဆိုရင် သုံးစွဲသူတွေဟာ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကို စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ သုံးစွဲနိုင်မှာပါ၊ စျေးသက်သာတဲ့ data package ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်းအင်တာနက်ကိုသုံးပြီး ဗွီဒီယိုကြည့်တာတွေ၊ ဂိမ်းကစားတာတွေနဲ့ တခြား ဒေတာအကုန်မြန်တဲ့ app သုံးစွဲမှုတွေကို စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်၊” ဟု ပြောသည်။
“ဒေတာများတဲ့ည”အစီအစဉ်ကို ရယူသုံးစွဲသူသည် ဆွေသဟာမှ အခြေခံစနစ်သို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပါက ထို ဒေတာအထူးစျေးနှုန်းကို သုံးစွဲနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အခြေခံစနစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီး သုံးစွဲနိုင်သည့် ပရိုမိုးရှင်းသက်မှတ်ရက်အတွင်း ဆွေသဟာသို့ ပြန်လည် ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုက်ပါက ဒေတာအထူးစျေးနှုန်းကို ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ MPT မှ အသုံးပြုပုံမျှတရန်အတွက်လည်း တစ်ညတာလျှင် ၈ နာရီနှုန်းဖြင့် သုံးစွဲနိုင်ရန်စီစဉ်ထားသဖြင့် 1 night package ကိုယူသူများအနေဖြင့် သုံးစွဲချိန် ၈ နာရီ၊7nights package ယူသူများအတွက် သုံးစွဲချိန် ၅၆ နာရီနှင့် 30 nights package ကိုယူသူများအနေဖြင့် သုံးစွဲချိန် ၂၄၀ နာရီ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 1 night package ကိုရယူသူများသည် ၈ နာရီကြာသုံးစွဲခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ည ၁၁ နာရီမှစတင်ကာ နံနက် ၇ နာရီအတွင်း သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၄င်းအစီအစဉ်ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများအတွက် မျှတသော အသုံးပြုမှုဖြစ်စေရန် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ၏ စတင်ဝယ်ယူချိန်မှစကာ အသုံးပြုမှုကြာချိန် ၈ နာရီကို သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး စတင်ဝယ်ယူသည့်နေ့တွင် ဝယ်ယူအသုံးပြုချိန်သည် ည၁၁ထက်နောက်ကျပါက ကျန်ရှိသောအချိန်ကို နောက်လာမည့်နေ့တွင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ ၁။ အကယ်၍ သုံးစွဲသူတစ်ဦးသည် 1 night package ကို ည ၁၁ နာရီမထိုးမီ ဝယ်ယူပါက ထိုဝယ်ယူထားသည့် ဒေတာကို ည ၁၁ နာရီမှ နံနက် ၇ နာရီအတွင်း သုံးစွဲနိုင်မည်။
ဥပမာ ၂။ အကယ်၍ သုံးစွဲသူတစ်ဦးသည် “ဒေတာများတဲ့ည” 1 night package ကို ည ၁၁း၃၀ တွင် ဝယ်ယူမိပါက စတင်ဝယ်ယူသည့် ၁၁း၃၀ မှ နံနက် ၇ နာရီအထိသုံးစွဲနိုင်ပြီး ကျန်ရှိနေသေးသည့် မိနစ် ၃၀ အတွက်ကိုမူ နောက်တစ်နေ့ည ၁၁ နာရီမှ ၁၁း၃၀ အတွင်း သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ ၃။ အကယ်၍ နံနက် ၄ နာရီမှစတင်၍ ဤ 1 night package ကိုဝယ်ယူမိပါက ထိုနေ့နံနက်အတွက် ၄ နာရီမှ ၇ နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသည့် ၅ နာရီကြာအသုံးပြုမှုအတွက် နောက်တစ်နေ့ည ၁၁ နာရီမှစ၍ စတင်ဝယ်ယူချိန် နံနက် ၄ နာရီထိ ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 22, 2016 နိုဝင်ဘာ 7, 2016 Categories Current Promotionsmm, Press Releasesmm
Buy Samsung Galaxy J Series (J1 2016) and enjoy 400 MB Data Usages, 60 Mins Calls and 100 SMS for6months
[:en]When customers buy any new Samsung Galaxy J1 2016 during the promotion period, they can enjoyafree MPT Sim Card with free 400 MB Data Usage, 60 Mins (On-net: MPT to MPT ) Call and 100 SMS (On-net: MPT to MPT), if they top up at least Ks.1,000 per month (including the first month). This free bonus 400 MB, 60 Mins and 100 SMS will only be given once per month, up to6months from activation.
Promotion will be valid till further notice.[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 18, 2016 နိုဝင်ဘာ 7, 2016 Categories Press Releasesmm
MPT မှ မြန်မာပြည်ရှိ Smartphone သုံးစွဲသူများကို ပိုမိုစနစ်ကျလုံခြုံစွာ နှင့် အကျိုးရှိစွာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုတတ်စေရန် MPT Mobile Seminar များ ပြုလုပ်ပေးမည့်အစီအစဉ်
[:en]ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ရက်– မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT)မှ မြန်မာပြည်ရှိ Smartphone သုံးစွဲသူများ ပိုမိုစနစ်ကျလုံခြုံစွာနှင့် အကျိုးရှိစွာကိုင်တွယ်အသုံးပြုတတ်စေရန် အတွက် အင်တာနက်လုံခြုံရေးများအကြောင်းကို သိရှိနိုင်ရန် ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ ၅၆ပွဲအား ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်မှ မတ်လ ၉ ရက်နေ့များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသများနှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့နယ် ၂၈ မြို့နယ်မှ အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များ နှင့် စက်မှုဇုံများများတွင် ပြုလုုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့၏ လူနေမှုပုံစံ တိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ပေးမည့် MPT ၏ ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ MPT မှ တာဝန်ရှိသူများက မိမိတို့၏ဖုန်းများကို လုံခြုံစွာ၊ အကျိုးရှိစွာ၊ နှင့် အသုံးအတည့်ဆုံးသုံးစွဲတတ်စေရန်အတွက် အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဆွေးနွေးပြောကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲများအတွင်းတွင် MPT မှ စမတ်ဖုန်းများ၏ အသုံးဝင်ပုံများ၊ မသင့်လျော်သော အသုံးပြုပုံများကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာတတ်သည့် ပြဿ နာရပ်များ ၊MPT ဝန်ဆောင်မှုများ အကြောင်းကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြောပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဖုန်းအတွင်း မိုဘိုင်းအင်တာနက် အသုံးပြုရာတွင် ဒေတာ (Data) အသုံးပြုမှုကို သုံးစွဲသူကိုယ်တိုင်မည်သို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း နှင့် မည်သည့်အရာများကို ရှောင်ရှားသုံးစွဲသင့်ကြောင်း စသည့် ပညာပေးဆွေးနွေးခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operation ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Koichi Kawase က “ဒီနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်း မှာ စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲမှုတွေ မြင့်တက်လာတာကို ကျွန်တော်တို့ သတိပြုမိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အင်တာနက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနည်းပညာအကြောင်း၊ ဆိုင်ဘာနည်းပညာကိုမသင့်လျှော်စွာအသုံးချခံနေရမှုအကြောင်း ကို မျှဝေပေးတဲ့ အပိုင်းမှာကျတော့ အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတာကို မတွေ့ရဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူတွေအားလုံးကို ဖုန်းတွေ ဘယ်လိုမျိုး သေသေချာချာကိုင်တွယ်ရမယ် ဆိုတာတွေ၊ အင်တာနက်လုံခြုံရေးအကြောင်းတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအကြောင်း အသေးစိတ်တွေ သေချာသိနိုင်အောင် ပညာပေးဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးရင်း သုံးစွဲသူတွေပိုမိုအသိပညာ ကျယ်ပြန့်လာအောင် လုပ်ပေးချင်တာပါ။” ဟု ပြောသည်။
၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပြီလမှစတင်ပြီး MPT သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ MPT Branded Shops များဖွင့်လှစ်ထားသော နေရာများတွင် Mobile Seminar များ ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ MPT Mobile Seminarများကို အောက်ပါမြို့နယ်များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မအူပင်၊ ဖျာပုံ၊ ဘိုကလေး၊ မော်လမြိုင်ကျွန်း၊ ညောင်တုန်း၊ ပုသိမ်၊ ငပုတော၊ လပွတ္တာ၊ မြောင်းမြ၊ ဝါးခယ်မ၊ ရေကြည်၊ ကျုံပျော်၊ အင်္ဂပူ၊ ကြံခင်း နှင့် ဟင်္သာတမြို့နယ်တို့ ပါဝင်ပြီး
အောင်မြေသာဇံ၊ ချမ်းအေးသာဇံ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်၊ မဟာအောင်မြေ၊ ပုသိမ်ကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်၊ ပြင်ဦးလွင်၊ မိတ္ထီလာ၊ ကျောက်ဆည်၊ မြင်းခြံ၊ ပခုက္ကူ၊ ညောင်ဦးနှင့် ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်တို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 10, 2016 နိုဝင်ဘာ 7, 2016 Categories CSR Activitiesmm, Latest Newsmm, Press Releasesmm
[:en]MPT ၏ အထင်ကရ Branded Store တစ်ခုကို ရန်ကုန်မြို့ဆူးလေဘုရားအနီး ဖွင့်လှစ်
၂၀၁၆ မတ်လကုန်မတိုင်မီဖွင့်လှစ်မည့် အရောင်းပြခန်း ၁၀၀ ကျော်ထဲမှ ပထမဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက် Myanma Posts and Telecommunications (MPT), မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT)မှ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအချက်အချာဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့တွင် MPT Branded Store တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆူးလေဘုရားအနီး၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်တွင် တည်ရှိသည့် အဆိုပါအရောင်းပြခန်းသည် ၂၀၁၆ မတ်လကုန်မတိုင်မီဖွင့်လှစ်မည့် အရောင်းပြခန်း ၁၀၀ ကျော်ထဲမှ ပထမဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိသုံးစွဲသူ ၁၈ သန်းကျော်အတွက် ကတ်ပျောက်/ကတ်ပျက်စီးမှုများ ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအပါအဝင် အခြားသောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများရယူနိုင်သည့့် MPT ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် အထင်ကရ အရောင်းပြခန်းတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းတွင် MPT အရောင်းဆိုင်ပေါင်း ၈ သောင်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်သည့်အပြင် ထိုဆိုင်များတွင် MPT SIM ကတ်များ၊ ငွေဖြည့်ကတ်များ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး၊ MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အထူးအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operation ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr.Koichi Kawase က “MPT က ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ သုံးစွဲသူအားလုံးအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေကို မြှင့်တင်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့က ကွန်ရက်တွေကိုလည်း ချဲ့ထွင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာပြည်သူပြည်သား ၉၂% ကိုလည်း 3G ကွန်ရက်ရရှိ သုံးစွဲနိုင်ဖို့ အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါပြီ။ အခုဆက်ပြီးတော့လဲ MPT အမှတ်တံဆိပ် အထူးအရာင်းပြခန်းတွေကို ထပ်မံတိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် မတ်လကုန်မတိုင်မီမှာ MPT Branded Store ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ဖွင့်လှစ် သွားပါမယ်။ သုံးစွဲသူတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဝန်ဆောင်မှုပေးတာဟာ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံ ထားပါတယ်၊ အခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့လယ်က အရောင်းပြခန်းဟာ အနီးတဝိုက်က နေထိုင်သူတွေအပြင် နေ့စဉ် ဖြတ်သန်းသွားလာနေသူတွေပါ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အလွယ်တကူ ရယူနိုင်မယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသစ်ထပ်ဖွင့်လှစ်မယ့် အရောင်းပြခန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီသိဖို့ Facebook နဲ့ LINE က MPT တရားဝင်စာမျက်နှာတွေမှာရော၊ MPT website မှာပါ ကြည့်ရှုပြီး မိမိနဲ့အနီးဆုံး အရောင်းပြခန်းကို ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
၂၀၁၆ မတ်လမကုန်မီ လူစည်ကားရာနေရာများတွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည့် MPT အရောင်းပြခန်းအသစ်များ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး – လမ်း ၄၀၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ရွှေဂုံတိုင်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး – အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်၊ ညောင်ဦး၊ မိတ္ထီလာ၊ မြင်းခြံ၊ မိုးကုတ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး – မုံရွာ၊ ထီးချိုင့်၊ ရေဦး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး – ပဲခူး၊ ပြည်၊ မင်းလှ၊ လက်ပံတန်း၊ ပေါက်ခေါင်း
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး – မကွေး၊ တောင်တွင်းကြီး၊ ချောက်၊ ပခုက္ကူ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး – ပုသိမ်၊ ဟင်္သာတ၊ ဇလွန်၊ ဘိုကလေး၊ ဖျာပုံ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး – ထားဝယ်၊ မြိတ်၊ ကော့သောင်း၊ ပုလော
ကချင်ပြည်နယ် – မြစ်ကြီးနား၊ တနိုင်း၊ ဖားကန့်
ကယားပြည်နယ် – လွိုင်ကော်
ကရင်ပြည်နယ် – ဘားအံ၊ ကော့ကရိတ်၊ မြဝတီ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး
ချင်းပြည်နယ် – ဟားခါး
မွန်ပြည်နယ် – ကျိုက်ထီးရိုး၊ မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ်၊ မော်လမြိုင်
ရခိုင်ပြည်နယ် – စစ်တွေ၊ မောင်းတော၊ သံတွဲ
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) – ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ တာချီလိတ်
ရှမ်းပြည်နယ် – ( တောင်ပိုင်း ) – တောင်ကြီး၊ ညောင်ရွှေ၊ အေးသာယာ၊ နမ့်ဆန်
ရှမ်းပြည်နယ် – (မြောက်ပိုင်း) လားရှိုး၊ မူဆယ်
Author MPT TelecommunicationPosted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 10, 2016 နိုဝင်ဘာ 7, 2016 Categories Press Releasesmm